Wadada cusub ee silsiladaha hudheellada shisheeye waa 3. garoonka diyaaradaha | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWaddada cusub ee silsiladaha hoteelada shisheeye waa 3. garoonka
15 / 06 / 2014 34 Istanbul, GUUD, Headline, TURKEY
Waddada cusub ee silsiladaha hoteelada shisheeye waa 3. Madaarka: 3, silsiladaha hudheelka ee caalamiga ah, ayaa lagu dhisi doonaa Istanbul waxana uu noqon doonaa kan ugu weyn Europe. Garoonka diyaaradaha waxaa lagu calaamadeeyay agagaarkiisa. Accor, Hilton iyo Wyndham waxay horeyba u soo qabteen gacmahooda si ay ugu maalgashadaan aagga.
Saldhigga Istanbul ee 3, oo dhowaan la dhisay Raysal Wasaare Recep Tayyip Erdogan. Meelaha ay garoonka diyaaradaha ku yaalaan waxay noqdeen meelaha xiisaha leh ee kooxaha hudheelka ah ee adduunka oo dhan. Inkasta oo saldhigga la dhigay weli, raadinta goobta silsiladaha waaweyn ee caalamiga ah ee ku yaala garoonka diyaaradaha ayaa hore u bilowday. Iyo dalalka deriska Turkey Shirka Maalgashiga Hotel (CATHIC) ee maamulayaasha of silsilado hotel weyn oo dalka Turkiga yimid u sheegay qorshayaasha maal-star ah ee Turkey. Hilton, Accor iyo Wyndham silsilado hotel kooxda sida agaasime oo sheegay in ay doonayaan in ay dib u bilaabaan qorshaha koritaanka ay magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga, gaar ahaan 3. ayaa sheegay in ay isku dayayaan in ay ka jiraan aagga garoonka.
Accor: Turkey waa furaha inoo ah
Jean-Lacques Dorees, Mediterranean, Bariga Dhexe iyo Afrika oo ah CEO of French Accor Group, oo leh lahaansho sida IBIS iyo Novotel, ayaa lagu qaban doonaa Istanbul. in uu ku yaal aagga garoonka diyaaradaha ayaa noqon lahaa horumar caadi ah iyaga, ayuu yiri. 3-6 sano ka hor ay bilaabeen hawlgallada ee Turkey iyo hadda sii adigoo sheegaya in ay hotel Dess 7, 14 8 dhamaystirka heshiis cusub hotel oo wuxuu ku yidhi sidoo kale ay shuqulka sameeyey, waayo, hotel cusub. Labada Accor sidii maalin adduunka oo dhan hoosta ka xariiqeen hotel furay Dess sheegay in Turkey waa dal muhiim ah oo naftooda u, oo ay ku jirto meesha laga helo. qaab-dhismeedka dhaqaalaha Turkey waa firfircoon ah, Dess ayaa sidoo kale sheegay in suuqa gudaha waxay bixiyaan fursado weyn naftooda, "Turkey xaqiiqo ah ayaa la hayo ay meel ka mid ah qorshaha koritaanka our," ayuu yiri. 23 Turkiga la yimid brand ay badbaadin Accord CEO, ayaa sidoo kale sheegay in ay raadinayaan hab ay ku shaqeeyaan la magac kale ee Turkey.
Hilton: Review Review
xanbaarsan horyaalka ee isagoo silsilad ugu horeysay hotel Hilton Worldwide Turkey galeen suuqa ee Turkey, Russia iyo Eastern Madaxweyne ku-xigeenka Europe Michael Collini, Turkey ayaa sheegay in ay ku tilmaameen kordhaya muhiimadda istiraatiiji ah suuqa. 3, oo bilaabay inuu ka shaqeeyo Istanbul. Ini Marka aan ka fekereyno baaxadda garoonka iyo sanad walba mustaqbalka rakaabka 150 million ayaa hubaal ah in ay isku dayayaan in ay ka qayb qaataan aaggan, Coll Collini ayaa yiri. Collini muujinaysaa in ay yihiin mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee agagaarka garoonka diyaaradaha kaas oo sidoo kale waxay leedahay hawlgallada ee gobollada kala duwan ee dunida "Turkey hubaal leeyihiin gool our jihada this," ayuu yiri. 3 gobolka diiradda ee Turkey, hore ee Istanbul, Collin leh in haddii magaalooyinka iyo meelaha loo dalxiis tago ee labaad Anatolia "furo hotel 26 our. Hawlaha furitaanka ayaa ka socda hotelka 26. Waxaan rabnaa in aan sii wadaan in ay koraan in Turkey, "ayuu yidhi.
Wyndam: Waxaan halkaas joogi doonaa
Robert Loewen, Maamulaha Hawlaha ee Wyndham Hotel Group, oo noqday mid ka mid ah hudheelada ugu horreeya ee Istanbul sanadihii ugu dambeeyay waxaana uu leeyahay magacya Ramada, Hawthord iyo Wyndham, 3. Ka dib markii la dhamaystiray maddaarka garoonka, mudnaanta koowaad ee hudheelka ayaa ah dadaalka lagu doonayo in lagu dhigo aaggaas, ayuu yiri. Ew Magacyadayadu waxay ka shaqaynayaan inay halkaas joogaan. Waxaan dooneynaa inaan furno hotel ku dhow garoonka diyaaradaha. Waxaan hubaa inaanu qorsheyneyno inaan ku ooleyno aaggaas halkaas oo ay ku yaalaan dukaamo, xafiisyo iyo hudheelo. Turkey ayaa Loewen, taasoo muujinaysa in mid ka mid ah suuqyada ugu dhaqsiyaha badan sii kordhaya isu for "suuqa ee Turkey, ka duwan dalalka kale, waxaa iskuna xasilooni siyaasadeed iyo dhaqaale ee qorshaha maal-gashiga our," ayuu yiri. Loewen, huteelada ugu horeeya ee 2007
Waxa uu sheegay in ay ahaayeen furan hadda ku yaalla suuqa hotel Turkey iyadoo in ka badan 30.
WAXAAD U BAAHAN YAHAY DADKA DHAMAADKA
3. Saldhigga garoonka diyaaradaha ayaa la dhigay munaasabad lagu qabtay June iyada oo ay ka qaybgaleen ra'iisal wasaare Recep Tayyip Erdogan. Erddi Garoonka diyaaradaha waxaa lagu dhisay meel ka mid ah 7 million mitir oo laba jibbaaran. 76.5 million 1 kun mitir oo laba jibbaaran oo dabaq ah ayaa laga heli doonaa meeshan weyn. Iyada oo cabbirkani, madaarka ayaa ah kan ugu weyn adduunka. 471 waxay noqon doontaa tan ugu weyn adduunka oo leh mashiinka madax-bannaan, 6, awoodda dayuuradaha ee 500 iyo baabuurta la dhigto oo loogu talagalay hal kun oo gawaarida, gaar ahaan rakaabka 70 million rakaab sanadkiiba. "
Waddada cusub ee Dhismaha Hindiya
Mashruuca cusub ee mashruuca HS2 High Speed ​​Train Project ayaa lagu dhawaaqay
Wakiilada IZBAN ayaa hadlay